Donald Trump oo sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan u musaafurin doono Dad tiradooda ay gaareyso illaa 3 milyan oo qaxooti ah!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Donald Trump oo sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan u musaafurin doono Dad tiradooda ay gaareyso illaa 3 milyan oo qaxooti ah!!
Donald Trump oo sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan u musaafurin doono Dad tiradooda ay gaareyso illaa 3 milyan oo qaxooti ah!!
Nov 13, 2016WARAR
Madaxweynaha la doortay Donald Trump ayaa sheegay inuu qorsheynayo inuu musaafuriyo labo illaa saddex milyan oo qaxootiga aan la diiwaan gelin ee sharci darada ku jooga Mareykanka.
Previous PostFaah Faahino kasoo baxaysa Dilal kala duwan oo shalay ka dhacay magaalada Muqdisho!! Next PostDaawo Muuqaal: Xubnaha kasoo jeeda maamulka Somaliland ee MUQDISHO ku Sugan oo Isku haysta Kuraasta XILDHIBAANADA iyo ceeb dhacday!!